မည်သို့ကျောင်းဆက်ဆံရေးရုံးဖြစ် | USAHello ထံမှအလုပ်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
A school (or school-home) liaison isaperson who connects the school to parents and students. This job isagrowing field because more and more schools are realizing that liaison workers help children do better at school. ဒါဟာသူတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းကိုတစ်ဦးထက်ပိုဘာသာစကားပြောဆိုဂရုစိုက်သူကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်များအဘို့ကြီးစွာသောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်.
ဒီအလုပ်ကတခြားအမည်များဖြစ်ကြသည်: အသိုင်းအဝိုင်းဆက်ဆံရေးရုံး, ကျောင်းကဆက်ဆံရေးရုံးအရာရှိတစ်ဦး, ကျောင်းနေအိမ်ပြန်ဆက်ဆံရေးရုံး, မိဘ-ကျောင်းကိုဆက်ဆံရေးရုံးအလုပ်သမား, နှင့်မိဘဆက်ဆံရေးရုံး.
A school-home liaison is there to help students succeed. ဒီလိုလုပ်ဖို့, သူတို့ကျောင်းနှင့်မိသားစုများအကြားကောင်းသောဆက်ဆံရေးကိုစောင့်ရှောက်, သူတို့မိဘများကိုကူညီ, လွန်း.
အတော်များများသည်ကျောင်းဆက်ဆံရေးရုံးအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ကြဘူးကြောင်းမိသားစုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်. သူတို့ကအသစ်သောကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းတွင်သို့အခြေချကူညီ, သူတို့ပြဿနာများနှင့်အတူကျောင်းသားများကိုကူညီ. School-home liaisons also help teachers by making sure their communication with families is good.
Share information among students, မိဘများ, နှင့်ကျောင်းန်ထမ်း
Organize community events and activities that support families, ထိုကဲ့သို့သောပွင့်လင်းအိမ်များနှင့် potlucks အဖြစ်
Run programs for parents, ထိုကဲ့သို့သောမိဘအုပ်ထိန်းအတန်းနှင့်အင်္ဂလိပ်အတန်းအဖြစ်
School-home liaisons usually work in one school, ဒါပေမဲ့သူတို့တော်တော်များများကျောင်းတွေဖုံးအုပ်နေတဲ့ကျောင်းခရိုင်များအတွက်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ. They often have their own office so they can talk to students and families in private.
The salary ofaschool-home liaison in the United States ranges from $25,535 သို့ $37,400 တစ်နှစ်, ပျမ်းမျှလစာနှင့်အတူ $19 တစ်နာရီလျှင်.
Liaison work in schools isagood job foraperson who cares about children, အဘယ်သူသည်အခြားဘာသာစကားမပြောတတ်နိုင်ပါတယ်, နှင့်ကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုလေးစားမှုသောသူသည်, ပညာရေးအဆင့်ဆင့်, နှင့်လူနေမှု. သငျသညျအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ရပ်များကိုခံစားလိုလျှင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများနှင့်အတူလူကိုကူညီတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအလုပ်နိုင်ပါတယ်.
ဖော်ရွေ, အားတက်စရာ, Non-စျကွောစီရငျထုံးစံ
ခက်ခဲသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်စွမ်းရည်
လူရဲ့ privacy ကိုရိုသေလေးစားမှု
ကွန်ပျူတာဒေတာ entry ကို
သင်သည်သင်၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကွောငျးတှေ့လိမျ့မညျ, ရပ်ရွာမှ connection ကို, နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုဒီအလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းများဖြစ်ကြသည်.
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ရေးလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွင်ယခင်အတွေ့အကြုံပါလိမ့်မယ်, ကြောငျး, သို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းက.
သင်တစ်ဦးသည်ကျောင်းဆက်ဆံရေးရုံးဖြစ်လာမယ့်တိကျတဲ့လက်မှတ်မလိုအပ်ပါဘူး. ဒါပေမဲ့ကျောင်းကအိမ်ပြန်ဆက်ဆံရေးရုံးမကြာခဏဒုက္ခသည်နှင့်လူဝင်မှုလူဦးရေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်. သငျသညျအကွောငျးကိုကြှနျုပျတို့၏အခမဲ့လူတန်းစားယူနိုင်ပါသည် ပညာပေးဒုက္ခသည်နှင့်လူဝင်မှုကျောင်းသားများကို. ဒါဟာမိသားစုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အကြောင်းသင်ခန်းစာလည်းပါဝင်သည်.
တချို့ကကျောင်းကခရိုင်အတွေ့အကြုံကိုမိသားစုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြမှကျောင်းကဆက်ဆံရေးရုံးလိုအပ်. သငျသညျသေးအတွေ့အကြုံရှိသည်မထားဘူးဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ဒေသခံကျောင်းတွင်လုပ်အားပေးနိုင်ပါတယ်, တစ်ဦးပြီးနောက်ကျောင်းအဖှဲ့အစညျးမှာ, မိသားစုများကိုကူညီကြောင်းကိုသင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်သို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့အစည်းများ. For example you can volunteer with Reading Partners. သို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင် find an after-school program near you where volunteers are needed.
You can also search FindHello for community organizations in your city. If you are looking forapaid job, Schoolspring.com ပညာရေးအလုပ်အကိုင်တွေအဘို့အ website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်.